Train Trip voalohany indrindra natao tany Italia | Save A Train
Home > Travel Europe > Train Trip voalohany indrindra natao tany Italia
Italia manana fiaran-dalamby mahafinaritra fitsangatsanganana. Izany dia maro tsara tarehy fiarandalamby sy ny mahafinaritra stations manerana ny firenena, fa aiza no voalohany nandeha lamasinina indrindra natao tany Italia?
Train Trip voalohany indrindra natao tany Italia – The Beginning
Ny voalohany nandeha lamasinina indrindra natao tany Italia introduced railways was when Italy was a divided firenena. Nitaky taona maromaro mba manana rohy mankany sy hampifandray ny efa misy lalamby taorian'ny tafaray Italia. Ny zotra fiaran-dalamby voalohany naorin'i Italia dia ny làlan'i Naples to Portici izay teo amin'ny fanjakan'ny Sicily roa. Ny andalana dia 7.25 kilaometatra ela. Ny tsipika notokanana tamin'ny 3RD Oktobra in 1839. izany no 9 taona taorian'ny voalohany "maoderina" anatiny-tanàna naorina tsipika izay ny Liverpool sy Manchester Railway.
Ny lalana voalohany dia lalana roa heny ary nandositra avy any amin'ny toerana amin'izao fotoana izao ny Corso Garibaldi any Naples any amin'ny Royal Palace amin'ny Portici. Ny lapan'ny mpanjaka teo am-pototry ny Volkano Vésuve ny malaza. Ny olona voalohany nanao ny fiaran-dalamby nankany Italia eto, ary izany ankehitriny tsipika tsy ampy anisan'ny Naples-Salerno lalamby tsipika.
Naples ho Salerno Lamasinina
Ny Naples-Salerno lalamby tsipika no lehibe ao amin'ny lalamby tsipika Italiana rail Network today and has a place in The First Train Trip Ever Made in Italy. Izany teny rohy ao amin'ny vatabeny tsipika ny Southern Italia. Ny andalana voalohany dia ny voalohany kilometatra lalamby tsipika. Ankehitriny ny olona mampiasa ny lamasinina ho iray amin'ireo indrindra malaza toerana, a famous coastal town called Amalfi in the region of Campania. Izy io dia mahavariana tanàna amoron-tsiraka. Tena azo antoka ny milaza fa ny fiaran-dalamby dia mba ahatongavana any manamorona ny morontsiraka dia be toy izany koa. Eritrereto rano kristaly, fasika fotsy sy maitso mavana maitso sy tsara tarehy ny sasany anivon'ny Taloha sy Vaovao trano. Ho mandehana any amin'ny sary an-tsaina ny lamasinina nankany avy any Naples any Salerno, izay ho avy eo hisambotra ny fiara fitateram-bahoaka na ny hafa fitaovam-pitaterana voalamina ho Amalfi.
Ary ny zava-nitranga tamin'ny Naples-Portici tsipika? Ny Faculty ny Fambolena ny Oniversite ny Naples Federico II no tena mpampiasa ity andalana noho ny mora ny fidirana amin'ny Volkano Vésuve. Ny voalohany dia nandeha lamasinina lalana tany Italia mbola misy amin'izao fotoana izao.
Ny làlan-dalamby voalohany tany Italia dia namonjy lalana ny ho avin'ny fitsangatsanganana lamasinina ao amin'ny firenena. Ny sasany amin'ireo tsara indrindra lamasinina nandehanany eto. Rehefa manao jery todika ny voalohany nandeha fiarandalamby indrindra natao tany Italia, afaka matoky isika fa na dia betsaka no niova. Ny toerana manodidina dia mbola toy ny nahasarika dia tahaka ny ankehitriny.
So now that you learned about The First Train Trip Ever Made in Italy, are you thinking of Famandrihana A Train Ticket for a European train trip? Nahoana raha 3 minitra eo amin'ny toerana mora indrindra mba hahitana ny tapakila ho an'ny lalana. Login ny ny toerana ankehitriny ny boky Lamasinina.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fthe-first-train-trip-ever-made-in-italy%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed.
Train Travel fiaran-dalamby nankany travelitaly